News Archive | Faaqidaad
Daawo:- Madaxwaynaha Puntland ”kuwa diidan Dawladnimada Alshabaab ayay Canshuurta siiyaan”.
By Editor 10 on 15. July 2017 News, PUNTLAND
Madaxwaynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa si adag uga hadlay xirnaanshaha suuqayada Boosaaso oo maalmahaan u xirnaa Canshuur ay diideen inay bixiyaan ganacsatada guryaha ganacsiga iska leh. Madaxwaynaha ayaa sheegay inaan canshuurta lagu lahayn dadka dukaamadu u kiraysan yihiin balse canshuurtaan lagu leeyahay dadka iska leh dhismayaasha ganacsiga ayna waajib dastuuri ah […]
Doorashadii Soomaaliya oo dib u dhacday
By Editor 10 on 26. September 2016 FEDERAL GOVERMENT, News
Doorashada Madaxwaynaha Soomaaliya ayaa bil dib u dhacday waxaana loo raray 30 Novembar sida ay shaaciyeen Gudiga Doorashada Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya. Doorashooyinka Hogaanka Baarlamaanka Aqalka hoose iyo kan sare ayaa igauna daba maray wakhtigii loogu talo galay, waxaana sidaas lagu sheegay Warsaxaafadeed galabta kasoo baxay gudiga Doorashooyinka Soomaaliya. Warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu […]
Soo gudbinta xubnaha Aqalka Sare oo dib u dhacay
By Editor 10 on 25. September 2016 FEDERAL GOVERMENT, News
25 Bishaan oo ah maalin Axad ah ayay ahayd in maamul Goboleedyada Soomaaliya oo ay qayb ka yhiin Gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe oo aan maamul lahayn inay soo gudbiyaan xubnaha Aqalka Sare u matalaya kuwaas soo xulistooda ay leeyihiin Madaxwaynayaasha maamulada oo la tashanaya Odayaasha dhaqanka. Jadwalka doorasho ayaa ay samayn ku yeelan doontaa […]
Wadada Ceerigaabo oo 60 dareewal loo qaatay
By Editor 7 on 17. September 2016 News, PUNTLAND
Guddiga dhismaha wadada isku xiri doonta Ceeldaahir ilaa Ceerigaabo ayaa maanta Boosaaso kaga qaaday imtixaan 60 dareewal oo u tartamay wadida gaadiidka lagaga shaqayn doono dhismaha wadadaas. Dareewalladan ayaa laga soo xulay ilaa 120 horay u soo codsatay ka shaqaynta mashruucan, xubno ka socday gudiga iyo khuburo kale ayaa joogay goobtii intixaanka lagu qaadayey. Maxamed […]
Damalaxagare oo xarun caafimaad laga dhagax dhigay
By Editor 7 on 13. September 2016 News, PUNTLAND
Waxaa Magalada Damalaxagare Ee Gobolka sanaaga Laga Dhagax Dhigay MCH xaruunta Hooyada Iyo Dhalanka oo markii ugu horeeysey ay yeelan doonto degaanka Damalaxagre ee gobolka sanaag. Xaruntan ayaa waxaa dhisidoona dadka degaanka oo sheegay in ay ku hirgelindoonaan si iskaa wax u qabso ah, dhagax dhigan ayaa waxaa goob joog ahaa Odaysha Magalada,Ururka Haweenka Damalaxagare […]
Wasiirkii Amniga Puntland oo dalka dib ugu laabtay
By Editor 7 on 11. June 2016 News, PUNTLAND
Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab oo horay ugu dhaawacmay rasaas ay is weydaarsadeen Ciidamo ka tirsan Booliska, Ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Wuxuu weriyayaasha u sheegay Qarjab oo mudooyinkii ugu danbeeyey xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayey dalka Jabuuti inay xaaladiisu tahay mid wanaagsan. Madaxweynaha Puntland ayaa horay shaqada uga eryey Taliyihii Booliska Janaral […]
Madaxweyne Gaas oo dib ugu laabtay Puntland
By Editor 7 on 8. June 2016 News, PUNTLAND, World News
Madaxweyanah Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Muddo Sadex Casho ah ku maqanaa waddanka Imaaraadka ayaa dib ugu laabtay Puntlnad, Isaga oo ka degey Garoonka Diyaaradah Bosaaso. Gaas ayaa ka warbixiyey Safarkii uu ku tegey Abu’Dhabi, Isagoo xusay inuu ku soo dhamaaday guul mar uu saxaafada kulla hadlayey garoonka diyaaradaha. Arrimha laga wadda’hadalya ayaa u badnaa […]
Raysal Wasaaraha Turkiga oo xilka ka degaya.
By Shiine Culay on 5. May 2016 News, World News
Raysal Wasaaraha Turkiga Ahmet Davutoglu ayaa sheegay inuu xilka ka degi doono marka xisbigiisa AK ay isugu yimaadaan shir aan caadi ahayn dhamaadka bishan. Isagoo aan ku qanacsanayn qorshaha Madaxweyne Erdogan ku doonayo inuu dalka Turkiga ugu raro nidaamka Madaxtooyada ayaa lala xiriirinayaa inay sabab u tahay iscasilaadiisa. Laakiin mar uu la hadlayey warfidiyeenada wuxuu sheegay inuusan […]
Wadahadaladii u socday wadamada soo saara shidaalka oo burburay.
By Shiine Culay on 17. April 2016 News, World News
Wadamada soo saara shidaalka ayaa ku guuldaraystay inay ku heshiiyaan qorshe la doonayey in qiimaha shidaalka dunidu saray loogu qaado kadib markii ay isku mari waayeen wadahadalo uga socday dalka Qadar. Shirkan waxaa isugu yimi wadamada ku jira ururka OPEC & Dalal kale oo soo saara shidaalka balse aan ururkaas ka mid ahayn sida Ruushka […]